Global Voices teny Malagasy » Manoka-baravarana hoan’ny feo isankarazany ny loka literatiora Taiwan ho an’ny mpifindra monina · Global Voices teny Malagasy » Print
Manoka-baravarana hoan'ny feo isankarazany ny loka literatiora Taiwan ho an'ny mpifindra monina
Voadika ny 17 Avrily 2018 5:15 GMT 1	 · Mpanoratra I-fan Lin Nandika Naomy
Ny lanonam-panomezan-doka literatiora ho an'ny mpifindramonina. Tompon-tsary: Wei-Hsiang Wang.
Ao Taiwan, mitombo isa ny mpiasa vahiny mpifindramonina tao anatin'ny taona vitsy ary lasa mandrafitra ampahany lehibe amin'ny fiarahamonina Taiwaney. Tokotokony ho 23 tapitrisa  eo ho eo ny mponina manontolo ao Taiwan, ary mandrafitra ny tokony ho 2,3%  amin'ny isam-bahoaka ny vahoaka tompotany ary misy ihany koa ireo vahiny mpiasa miisa 720.000  miasa any amin'ny sehatra indostrialy sy sampan-draharaha hafa. Avy any Azia Atsimo-Atsinanana, ary betsaka amin'izany ny avy any Indonezia, Vietnam, Filipina ary Thailandy ny ankamaroan'ireo mpiasa ireo. Tao anatin'ny 20 taona izay dia nitombo isa ireo vady avy any Azia Atsimo Atsinanan'i Azia sy ireo zanany izay manorim-ponenana ao Taiwan ary efa ho 200.000  eo ho eo ny isan-dry zareo.
Hatramin'ny taona 2014 bt loka fifaninanana literatiora haon'ny mpifindramonina tao Taiwan no nandrisika ireo vondron'olona teraka tany ivelany haneho hevitra amin'ny tenin-drazany, azaka iray ihany koa mamela ny vahoaka taiwaney hahafantatra bebe kokoa momba ireo kolontsaina sy tantara ireo.
Cheng Chang, mpanorina sady tonia teo aloha tao amin'ny 4-Way Voice, gazetiboky iray mamoaka tati-baovao amin'ny teny vietnamiana, indoneziana, tagalôgy, birmana ary kambôdziana no nisantatra hanaovana ity fifaninanana literatiora ity.
Ireo mpandresy tamin'ny loka fifaninanana literatiora voalohany ho an'ny mpifindramonina. Tompon'ny sary: Fifaninanana Literatiora hoan'ny mpifindramonina.
Cheng Chang manazava  ny antony nanetsika ny fananganana ity fifaninanana literatiora ity:
Hatramin'ny nananganako ny 4-Way Voice, dia lasa sehatra ho an'ireo mpiasa mpifindramonina tsy miteny shinoa hifanakalozam-baovao sy hanehoany ny hanina ny tanindrazany izy. Tsy hoe ampiasaina ho fitateram-baovaony amin'ny tenin-drazany ihany izy io fa namana iray mihaino ny feony sady tetezana mampifandray ny vahoaka Taiwaney amin'ny vahoakan'ny firenen-kafa. Hatramin'ny nanombohanay dia nahazo taratasy maro avy amin'ny mpiasa mpifindramonina manerana an'i Taiwan ny 4-Way Voice — mahazo taratasy 5600 eo ho eo isam-bolana. Miangona toy ny bolongan-dranomandry ireo taratasy ireo.
Na izany aza, noho ny fahitana ny fimaroany sy ny angovo ao anatin'ny fahaiza-mamorona, dia nikasa izahay hametraka fifaninanana literatiora mitoetra maharitra mba ahafahan-dry zareo mamoaka ny tantarany manokana amin'ny alalan'ny fanoratana. Afa-manangana literatiora vaovao hoan'ireo manana firenena roa hodiana (hoan'ireo vady avy amin'ny firenen-kafa), momba ny zanaka nateraky ny firenena roa (hoan'ny taranaka faharoa), ary momba ny any am-pielezana (hoan'ireo mpiasa mpifindramonina).
Amin'izao fotoana izao moa ny fifaninanana mandray lahatsoratra tamin'ny teny thailandey, indoneziana, vietnamiana ary tagalôgy. Satria moa lavitra ny tanindrazany ny ankamaroan'ireo mpanoratra ireo dia maro amin'ny tantara no miresaka fa manina ny fianakaviany sy ny tanindrazany ry zareo ary malahelo rehefa mahare ny fahafatesan'ny havana iray.
Nàng Thơ avy any Vietnam nanoratra taratasy  ho an'ny ray aman-dreniny:
Dada ô! Vao naneno nanamarika ny sasakalina ao Taiwan ny lakolosy. Efa renoka natory sahady ve ianao? Mbola miady amin'ny ratranao fahiny ve ianao?…Mbola manahy ny amin'ny zanakao vavy lasa niasa any amin'ny tany iray lavitra ny vahoakany ve ianao? Dada ô, fantatrao ve fa raha matory ny olona aty amn'ity tany lavitra sy vahiny ity, dia mipetraka eto kosa ny zanakao vavy ary manoratra amin'ny alina ny saininy sy ny tsiarony rehetra ary ny fiainany nandritra ny andro. Ray ô, manina ny zavatra rehetra aho, manina ireny folakandro ireny aho. Noho ny fahasahiranan'ny fianakaviantsika sy ny herin'ny fahatanorako, dia tsy maintsy nankaty amin'ny tany nampanantenaina fantatra amin'ny anarana hoe Taiwan ity aho. […]
Ahoana no hahafantarako fa valo volana monja nahatongavako teto Taiwan no nahalasanan'ny reniko? Nanahy ianao fa ho tohina aho ary harary aty amin'ity tany vahiny iry raha tsy misy ny fanohanan'ny havako, ka dia nafenin'ny fianakaviako ny vaovao mandra-pandrenesako azy tamin'ny namana iray. Dada ô, tohina toy ny nilatsaham-baratra aho. Nahatsiaro fanina tahaka ny hikorontana eo ambany tongotro ny tany. Nitomany aho, Neny…Neny…Fa ahoana no nandaozanao ny zanakao…Nahoana aho no tsy navelanareo hahafantatra? Aiza no ahafahako mahita anao? Neny…neny malala! Nikopakopa-tanana ahy ianao rehefa nandeha aho, fa tsy ho eo ianao hampandroso ahy rehefa mody aho.
Tantara mampalahelo tamin'ny fiainany tao Taiwan ny sasantsasany amin'ireo sombintantara. Tamin'ny taona 2013, tantsambo maro avy any Indonezia no namono ny kapitenin-tsambo Taiwaney. Na dia nahatsapa aza ny mpitsara fa nihoa-pahefana tamin'ny tantsambo ny kapiteny, dia nodidiana  higadra 14 ka hatramin'ny 28 taona ireo olona namono ny kapiteny. Tania Roos avy ao Indonezia nanoratra ny tantara  miresaka amintsika momba ireo tantsambo (toy ny tantara noforonina):
Tamin'ny voalohany ry zareo te-hampahafantatra ny kapiteny fa ao anatin'ny fahadisoana izy ka homena lesona ry zareo. Saingy nahazo tsinahy ny aorian'ny lohan'ny kapiteny, mbola variana, ny baramina notazonin'i Sardi. Nidaboka izy. Rehefa nahare ry Asto sy ny namany fa tsy mihetsika ny mpifanandrina aminy dia nirohotra ry zareo. Nanala ny fony teo ry zareo mandra-pahatoranany.
Taorian'izany nanatona ny vatan'ny kapiteny mihosin-dra i Sardi. Nihiaka i Sardi ary nihemotra dingana roa. Niakarapoka. Tsy nahateny izy. Nitodika tany amin'ny namany izy ary nanondro tany amin'ny kapiteny efa tsy misy aina intsony.
Nikoropaka ny ekipa raha vao nahare izany. Nitsapa ny fitempon'ny fony ny sasany. Ny hafa niezaka ny hihaino ny fofon'ainy. Iray hafa nieritreritra fa tsy nahatsiaro tena fotsiny izy. Ny iray hafa nitomanin'ny tahotra. Rehefa nahare izany sahotaka izany ny tao amin'ny efitra fibaikoana dia nisy roalahy nivoaka avy ao. Nivandravandra ry zareo rehefa nahita izay nitranga. Tena maty tokoa ny kapiteny. Nampandre ny tobin'ny polisy akaiky ny teo amin'ny fanamoriana.
Nitondra anay ny polisin'ny eny an-dranomasina, narahin'ny fotoam-pitsarana mahatrotraka izany, ary nambara ny didy tany amin'ny farany. Izay tokoa no tena nitranga, madama. Romotra izahay, nahatratra ny fetran'ny faharetanay izahay.’ hoy i Wasto niteny malefaka narahin-dranomaso.
manangona ireo lahatsoratra voafantina tamin'ny fifaninanana literatiora andiany voalohany sy faharoa ho an'ny mpifindramonina ny boky mitondra ny lohateny hoe ‘Flow’. Tompon'ny sary: Fifaninanana literatiora ho an'ny mpifindramonina.
Etsy ankilan'izany, feno fanantenana amin'ny hoavy ny sasantsasany amin'ireo tantara ireo. Avy any Thailandy i อนันต์ศรีลาวุธ  ary miresaka ny fitiavany hira izy sy ny fahazoana namana:
Ankehitriny aho manana karama ahafahako mamelona ny fianakaviako tsara kokoa ary ahafahan'ny zanako anankiroa mankany amin'ny kolejy. Afa-nahazo diplaoman'ny fihodinana voalohany aza aho. manambola aho hividianana gitara elekitrika. Tiako ny mitendry izany. Entiko hotendrena any amin'ireo sampan-draharaha ara-tsosialy ireo ny gitara, ao anatin'izany ny fonja manerana an'i Taiwan.
Mpianatra efa nahazo ny lisansa avy any Vietnam i Lê Hoàng Hiệp ary nosoratany ny tantaran'ny  vehivavy Vietnamiana iray nanambany olom-pirenena Taiwaney:
Tamin'ity folakandro ity, rehefa nahavita ny asany tao amin'ny biraon'ny fifindramonina izy, naka ny zananilahy tany an-tsekoly i Dung. Nandeha nankany an-tsena hividy sakafo hanaovana sakafo hariva ny reniny sy ny zananilahy mialoha ny hodiana. Tsy nisy olona ny lalana tamin'ity folakandro ity. Efa feno ny voankazony ireo hazo ireo teo ary efa lasa feno ravi-maintso tahaka ny hoe vaovao izany ry zareo amin'izao fotoana izao.
‘Anaka, nisy zava-nahaliana ve tany an-tsekoly?
Nipetraka tao aoriana i Hung ary mifikitra amin'ny reniny izy. Nanomboka niresaka izy rehefa nahare ny fanontaniana.
‘Eny. Nisy mpianatry ny oniversite tonga tao amin'ny lakilasinay ary nampianatra anay ny fomba fanaovana papangohazo. Rehefa nahafantatra ry zareo fa Vietnamiana ny reniko, dia nanontany ahy raha afa-miresaka amin'ny teny vietnamiana aho. Tsia, hoy aho, fa afa-mihira hira vietnamiana aho. Avy eo nihira ny hira nampianarinao aho, ‘Tiako nenibe’. Niteny ny rehetra fa mahay mihira aho.’
‘Tena mahay tokoa ny zanako. Hampianatra anao teny vietanmiana bebe kokoa aho amin'ny manaraka.’
Misy ny tantara sasany miresaka voina izay nahatohina ny firenena iray manontolo. Tamin'ny taona 2014, nisy tsatok'antsy nahazo ny daholobe  nitranga tamin'ny Metro tao Taipei ary nanoratra tantara  avy amin'izany zava-nitranga izany i Erin avy ao Indonezia.
Nahita tovolahy iray miakanjo mena mitazona antsy sady mitady hamono izay rehetra mifanakaiky aminy aho. Betsaka ny olona nianjera rehefa notsatohiny antsy ary miezaka ny mandositra azy araka izay azony atao ny hafa. Mitoraka izay zavatra rehetra azo itorahana an'ilay tovolahy ry zareo. Any amin'ny faran'ny fiara no misy ny raibeko [izay karakaraiko sady ao anatin'ny asa izany] sy izaho ary ireo zokiolona hafa, fa tsy nanana lalan-kivoahana aho! Tratran'ny kizo izahay!
Tsy fantatro ny isan'ny olona nidarako mihosin-dra tao amin'ny Metro. Nihorohoro aho. Tsapako mijery ahy ny Andriamanitry ny Fahafatesana. Nikainkona tao ambadiky ny seza-kodiarana iray aho. Niezaka aho nanafina ny tenako. Saingy tena feno tahotra aho. Tsy nanantena hiaina voina tahaka izany lavitry ny fianakaviako sy ny tanindrazako aho.
Avy any Indonezia i Nanik Riyati ary nanoratra ny tantaran'ny hijab izy :
Nahita ahy nanao (fehiloha-akanjo) hijab ny zanakavavin'ny patiraoko indray andro. Hita ho tsy faly izy ka niteny ahy hanala izany. Niteny ahy izy ny handehanako any amin'ny efitranony sy hampijery ahy lahatsary iray ao amin'ny Youtube. Nohazavainy ahy ny fombafombam-pandevenana shinoa [sy ny mety hahatonga ny hijab ho zavatra fampiasa amin'ny fombafombam-pandevenana]. Kivy sy nalahelo tokoa aho satria notenenina hanaIa ny hijab-ko. Nitafy izay tokony hotafiako aho, saingy ao an'eritreritro ao, te-hitafy hijab aho ary ho miozolomana tsara.
Nanomboka nivavaka aho ary nitady ny fomba hankatoavana an'i Allah sady manao ny asako. Manana fialonana sy malahelo aho rehefa mahita ny namako mitafy hijab ankahalalahana. Ny hany nolazaiko tamin'ny tenako dia hoe, ‘Allah, manantena aho fa indray andro any dia ho avela hitafy ny hijab-ko.’[…]
Tampoka teo, tsaroako ny taratasin'i dadabe nosoratany ho ahy. Raha mbola nanao ny devoarako tany am-pianarana aho, nanoratra tamin'ny zanakavavin'ny patiraoko tamin'ny teny anglisy tsotra dia tsotra aho. Mihevitra aho fa mahatakatra ny zavatra nosoratako tao anaty taratasy izy. Nohazavaiko azy ny adidin'ny Miozolomana. Baiko avy amin'i Allah ny fiakanjoana hijab, ary izany no fitsipika lehibe indrindra ho an'ny vehivavy ho fankatoavana ny fivavahana, izay ahafahako maharitra kokoa amin'ny fikarakarana ny dadabeny, ny zaza, ary mba ho mahatoky kokoa aho.
Rehefa vita ny asako dia nomeko azy ny taratasy nomaniko, ary nankany amin'ny efitranoko aho ary nivavaka. Tampoka teo nisokatra ny varavarana, nihazakazaka izy ary namihina ahy. Nanoroka ahy izy ary niteny hoe, ‘Afa-mitafy hijab ianao. Afa-mitafy ny akanjonao ianao. Afa-mivavaka ianao, afa-mianatra ianao, afa-manao izay rehetra tianao atao ianao, fa aza mandao anay ary miangavy aho karakarao i Ah-kong, satria tia sy mankamamy anao izy. Raha izany no antony hodianao dia miangavy anao aho monena eto ary ataovy izay asain'i Allah-nao atao. Avelako ianao (hitafy hijab) ary hohazavaiko amin'i Ah-kong sy amin'ny anadahiko izany.’
Nitomanim-pifaliana teo am-pandohalehana aho. Nofihiniko mafy izy ary nekeko ny hanitarana ny fifanarahan'asako. Ankoatra ny fanohizana ny fanabeazana ahy tany amin'ny oniversite, dia afa-nandoa ny trosako aho. Isaorana i Allah. Marina izao. Raha mivavaka amin'ny fo isika ary manohy amin'ny fanaovana ny asa dia hamaly antsika i Allah.
Ary farany, mamehy tsara ny tanjon'ny loka fifaninanana ny teny mahafinaritr'ilay  Filipiana Wala:
Te-hiaina ny fiainako feno eto aho mba ahafahako mizara izany fahalalana izany amin'ny Filipiana mpiray tanindrazana amiko rehefa miverina any Filipina. Hanohy amin'ny fanoratana aho. Saingy ny tantaram-piainako no hosoratako, tantara nohatevenin'ny kolontsaina samihafa.
Ho fanantontasana ny nofinofiko sy hanomezana hoavy mamirapiratra ho an'ny ankohonako, tao anatin'ny fahatanjahany ny foko. Raha tsy nandao ny tanindrazako aho dia tsy ho nahita mihitsy fa eto Taiwan aho manana Filipino mpiray tanindrazana amiko nahita ny fitiavany teto sy nanorina ny ankohonany. Fa azo tanterahana izany manana namana avy amin'ireo foko sy kolontsaina hafa izany.
Mbola lavitra ny lalan-kodiaviko saingy tamàna ny foko eto amin'ity tanindrazana faharoa hitako ato amin'ity firenena ity. Ho hita mivaingana tsikelikely ny nofinofiko. Tsy misy zavatra tsara toy ny mahita ny vokatry ny asako mafy na dia midika aza izany fa mbola mila miandry fotoana maharitra aho.
Na dia tsy afaka ny nahita asa nanaovana vozon'akanjo fotsy aza aho teto, dia te-hiarahaba ireo mpiasa tsotra rehetra eto Taiwan aho. Tsy mora ny asantsika. Tsy mahavita izany isika na dia kinga tokoa aza rehefa tsy misy ny fikirizana sy ny faharetana.
Isaky ny malahelo aho, dia mieritreritra fotsiny aho fa ireo andro mandalo ireo no andro mampanakaiky ahy kokoa hahitako ny tsikin'ny reniko sy hamihinako ny fianakaviako.
‘Dadabe ô, tratrako ny faran'ny saha. Tsy nandeha araka izany noresahantsika aho satria nahita aho fa afa-nanidina. Mankasitraka anao aho fa ianao no voalohany nampianatra ahy fa afa-manao izay rehetra tiako atao aho. Nianatra ihany koa aho fa misy fiainana vaovao eny amin'ny faran'ny saha. Ny fiafarana rehetra dia natao hisian'ny fiaingana vaovao.
Fankasitrahana: Isaorana manokana ny ekipan'ny Global Voices ao Azia Atsimo-Atsinanana, ahitana an'i Mong Palatino, Juke Carolina, ary Don Lê tamin'ny fanitsiana ny dikantsoratra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/17/117920/
 23 tapitrisa: http://www.worldometers.info/world-population/taiwan-population/
 tokony ho 2,3%: https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwanese_aborigines
 vahiny mpiasa miisa 720.000: http://statdb.mol.gov.tw/html/mon/212060.htm
 Cheng Chang manazava: http://tlam.sea.taipei/about-us-%E9%97%9C%E6%96%BC%E7%A7%BB%E6%B0%91%E5%B7%A5%E6%96%87%E5%AD%B8%E7%8D%8E-2/
 nanoratra taratasy: http://tlam.sea.taipei/2017/05/01/%E5%A4%9C%E8%A3%A1%E7%9A%84%E6%97%A5%E8%A8%98/
 nanoratra ny tantara: http://tlam.sea.taipei/2017/06/27/surat-rindu-dari-balik-jeruji/
 nosoratany ny tantaran'ny: http://tlam.sea.taipei/2017/04/23/%E9%BE%8D%E7%9C%BC%E6%88%90%E7%86%9F%E6%99%82-mua-nhan-chin/
 tsatok'antsy nahazo ny daholobe: https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Taipei_Metro_attack
 nanoratra tantara: http://tlam.sea.taipei/2017/05/06/%E6%B1%9F%E5%AD%90%E7%BF%A0%E7%9A%84%E5%8B%87%E5%A3%AB-lelaki-pemberani-di-jiangzicui/
 nanoratra ny tantaran'ny hijab izy: http://tlam.sea.taipei/2017/04/11/%E8%AA%A0%E5%AF%A6%E8%88%87%E9%A0%86%E5%BE%9E-kejujuran-dan-hijabku/
 teny mahafinaritr'ilay: http://tlam.sea.taipei/2017/04/20/%E8%BE%B2%E7%94%B0%E5%BD%BC%E7%AB%AF-sa-dulo-ng-bukid/